Sida loo qaabeeyo astaan ​​wanaagsan, astaamaha aasaasiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | logos, Khayraadka
Astaan ​​si wanaagsan loo qaabeeyey ayaa ah tan waxay siisaa qiime shirkadaha, maaddaama ay ka tarjumeyso qiyamka iyo falsafada kuwan hortooda macaamiishooda iyo guud ahaan dadweynaha, waxay sidoo kale u oggolaanaysaa inay ka soocnaadaan tartanka waana taas astaan ​​leedahay iyo naqshad wanaagsan wuxuu door bidaa Magaca shirkadda, taasi waa, kooxda matalaadda maskaxda, ha ahaato mid saameyn leh ama garasho leh, oo mid ama in ka badan shaqsiyaad la leeyihiin shirkad ama astaan.
Tallaabada koowaad iyo tan gaaro astaanta ugu fiican taas oo ku habboon baahiyaha astaanta, macaamiisha waa inay si faahfaahsan ugula xiriiraan istuudiyaha naqshadeynta garaafyada mid kasta oo ka mid ah astaamaha ay shirkaddoodu leedahay, kuwa suuqa ay ku socoto iyo fariinta ay doonayaan inay u gudbiyaan. Kadib, naqshadeeyaha wuxuu sameyn doonaa daraasad ku saabsan tartanka, ka dibna wuxuu bilaabi doonaa howsha sameynta astaanta.
1 Tallaabooyinka lagu qaabeeyo astaan ​​wanaagsan
1.1 Muuqaalka Muuqaalka
2 Maxay yihiin waxyaabaha u gaarka ah astaanta wanaagsan?
2.4 Nooca sawirka
2.5 Waa inay noqotaa mid isu eg
Tallaabooyinka lagu qaabeeyo astaan ​​wanaagsan
Nidaamka aragtida dhexdeeda muuqaal waxyaabo kala duwan ayaa ku lug leh, sida astaamaha dhaqan iyo nafsiyeed ee qof walba.
Tan iyo bilowgii maskaxda ayaa aragta qaababka taas oo doorbideysa aragti isku mid ah xusuusta; ka dib midabadu waxay kiciyaan shucuurta iyo ugu dambeyn nuxurka ku jira luqadda ay ku qasbanaan doonaan inay kalifaan.
Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha kaa caawin doona inaad hagaajiso astaantaada.
Ma rabtaa inaad barato sida loo sameeyo astaan ​​xirfad ahaan? Hagaag hada waa suurtagal mahadsanid koorsadan khadka tooska ah taas oo ku jirta qiimo aan caadi ahayn oo wakhti xaddidan ah> Soo gal koorsada
Maxay yihiin waxyaabaha u gaarka ah astaanta wanaagsan?
Astaan waa inay noqotaa mid fudud, hab noocan oo kale ah oo u oggolaanaya in la aqoonsado astaanta ay metelayso iyada oo la fiirinayo oo keliya, markaa way fududaanaysaa in la xusuusto, la midoobo ka dibna la soo saaro.
Si loo fududeeyo soo saarista astaanta iyadoo la adeegsanayo farsamooyin daabacaado kala duwan ama barnaamijyo kala duwan iyadoo aan loo eegin hadday yihiin mobayl ama shaashad, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in Codsiga midabku waa mid fududtaasi waa, isticmaal kaliya 2-3 midab.
Sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa isticmaalka hooska ama waxyeellada weheliyaha.
Sida laga soo xigtay RAE, xusuusta waxaa loola jeedaa “xusuus mudan”, Kaas oo u turjumi lahaa naqshadeynta astaanta sidii loo ilaalin lahaa oo keliya waxa run ahaantii lagama maarmaanka u ah, si markaa macaamiisha iyo guud ahaan bulshada ay u aqoonsadaan.
Iyadoo lagu xisaabtamayo in midnimada iyo asalka ay sidoo kale abuuri karaan astaan.
Midabku wuxuu soo saari karaa shucuur, diidmo ama soo jiidasho iyadoo loo eegayo niyadda, shaqsiyadda iyo duruufaha dhaqan ee qof kasta.
Sidoo kale, waxay si weyn u saameysaa helitaanka mid ama shey kale, waa taa sababta waa inaad si taxaddar leh u darsaan go'aanka midabka inaad isticmaali doontid markaad sameysid astaan, maadaama midabku abuurayo wacyigelin ku saabsan astaanta taas oo u oggolaanaysa in laga dhex ogaado oo lagu xasuusto suuqa dhexdiisa sidoo kale waxay dhiirrigelisaa kala duwanaanta, taas oo ay tahay inay waafaqsan tahay himilada iyo falsafadda shirkadda.
Xulashada iyo adeegsiga saxda ah ee qaab qoraalka astaanta waxay ku xirnaan doontaa in dadweynuhu u arko iyo in kale si ka wanaagsan. fariin ay calaamadu rabto inay gudbiso. Markaa waxay u baahan tahay inay ahaato mid si buuxda loo akhrin karo, sidaa darteed waa inay lahaataa cabir jidh oo habboon, jajab, dhumuc iyo midab.
Waxaan ula jeedaa, 2 noocyada kala duwan ee ugu badan waa in la adeegsadaa Marka la abuurayo astaanta, haddii kale dadweynuhu way wareeri karaan, sidoo kale, cabirka qoraalka waa inuu ahaadaa mid la akhrin karo xitaa haddii uu ku jiro cabirro runti yar yar, marka waa inaad doorataa font la jaanqaadi kara qaabab kala duwan.
Waa inay noqotaa mid isu eg
Waa inay noqotaa astaan ​​si fudud loola jaanqaadi karo lana garan karo iyadoon loo eegin cabirkeeda, taageeridiisa ama dalabkiisa.
Taasi waa, waa in loo isticmaali karaa labadaba xayeysiis ballaaran oo ku yaal dhinaca dhismaha ama xayeysiin qalin yar iyo xitaa waa in laga adeegsadaa websaydhka. Markaa inta badan lagu taliyaa waa astaamaha vectorAstaamo aad u faa'iido badan in la isticmaalo, laakiin waxaan ku sharxi doonaa taas si ka wanaagsan maqaal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sida loo qaabeeyo astaan ​​wanaagsan, astaamo aasaasi ah
Haa, mahadnaq wanaagsan, waxaa jira dhar badan oo la jarayo, waa arrin aad u adag, oo ay soo galaan dhowr qodob oo muhiim ah, sida wax ka qabashada saamiga, bilicsanaanta, qaybinta walxaha, kala sarreynta ay leeyihiin, kuwo kale oo badan ayaa soo galay
Jawaab Diego Rueda
Isku dar sawir qorista sawirada ku jira Photoshop